नेपाली हिराे, हिरोइनको उमेर कति ? (भिडियाे) - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाली हिराे, हिरोइनको उमेर कति ? (भिडियाे)
चलचित्र उद्योगमा अधिकांश हिरो र हिरोइनहरुले आफ्नो उमेर लुकाउने गर्छन् । यसो गर्नुका पछाडिको कारण उनीहरुले आफू अझै तन्नेरी रहेको देखाउनु नै हो । दर्शकहरुले भने उनीहरुका बारेमा अनुमान लगाउने काम गरेका हुन्छन– फलानो हिरोइन यति वर्ष पुगी होलि भनेर । कतिपयले चाहिँ आफ्नो उमेर नढाँटी बताउने पनि गर्छन् ।
याे पनि पढ्नुस चलचित्र झमक बहादुर निर्माण हुने
यो भिडियोमा नेपालका हिरो हिरोइनहरुको वास्तविक जन्ममिति र उमेर हेर्न सकिन्छ ।
ट्याग्स: Age of Nepali actor, Nepali Film Industry